Turkiga iyo Masar oo u muuqda in Cududooda ciidan ay ku tijaab... | Universal Somali TV
Dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Liibiya ee u dhaxeeya dhinacyada ku hardamaya siyaasada ayaa u muuqda mid waji kale Yeelanaya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Masar Cabdifataax Al-Siisi oo xiriir wanaagsan aan ka dhaxeyn ayaa hada bilaabay in cududooda ay ku tijaabiyaan Liibiya, iyagoo kala taageeraya dowlada iyo Mucaaradka.
Khilaafka labadan wadan ayaa laga cabsi qabaa in rajo beel uu ku rido nabad ka dhacda dalkan ku yaal waqooyiga Afrika.
Bishii September ee sanadkii hore ayaa madaxweyne Donald Trump casuumaad casho sharaf ah u fidiyay dhiggiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka qeybgalayay shirka Qaramada Midoobay.
Balse Erdogan ayaa ka biyo diiday casuumada taasi oo caro galisay maamulka madaxweyne Trump.
Madaxtooyada Turkiga oo ka jawaabeysa arintaan ayaa ku macneysay in sababta uu kulanka uga baaqday Erdogan aysan aheyn fikir kala duwanaashaha siyaasadeed ee u dhaxeeya Ankara iyo Washington, balse casuumaada uu qeyb ka yahay Cabdifataax Al-Siisii.
Hogaamiyaha Turkiga ayaa diidanaa in lagu ag sawiro madaxweynaha Masar oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxeyn dalkiisa tan iyo markii afganbiga talada looga tuuray sanadkii 2013-kii madaxweyne Maxamed Mursi.
Xukuumada Ankara ayaa aad uga xumaatay afganbigii lagu sameeyay madaxweynihii shacabka ay soo doorteen iyadoo taasi oo ay dheertahay in Turkiga si adag uga fal celiyay geerida sanadkii hore ku timid Mursi.
Wuxuu ku dhintay si sharaf ah waana shahiid ayuu yiri Erdogan kadib geeridii Mursi ee sanadkii hore oo uu ku eedeeyay in uu ka danbeeyay hogaamiye kaligii talis Ah.
Si kastaba ha ahaatee dowlada Turkiga ayaa sheegtay in difaaci doonto xukuumada Tripoli iyadoo xukuumada Masar ay dhankeeda taageereyso Janaraal khaliifa Xaftar maamula Mucaaradka ku sugan dhanka Bariga.
Kan-xigaDowlada Ciraaq oo si kulul uga hadash...
Kan-horeDad rayid ah oo lagu laayay duqeyn di...
55,406,764 unique visits